Ungawasebenzisa kanjani ama-PC amabili ngesibonisi esisodwa (i-HDMI switcher), i-Emulator.online ▷ 🥇
Ungawasebenzisa kanjani ama-PC amabili ngesibonisi esisodwa (i-HDMI switcher)
Uma sisebenza namakhompiyutha kakhulu, siyalungisa, sisebenzisa isitolo samakhompiyutha, noma sibhala izindatshana ku-blog yethu uqobo, kungenzeka ukuthi sinamadeskithophu amabili nesiqaphi esisodwa esingakusebenzisa kukho kokubili. Kulesi simo, akunconywa ukusebenzisa ikhebula elilodwa le-HDMI bese ulisusa kwelinye ikhompyutha liye kwelinye njengoba kudingeka njengoba itheku le-HDMI lingahlali litholakala kalula, futhi likwenza kube yinto ephazamisayo ukusebenzisa womabili amakhompyutha ngasikhathi sinye. Njengochwepheshe abahle be-IT, singabheja okuhle Impinda yesiginali ye-HDMI O Iswishi ye-HDMI, ekwazi ukuphatha ukusakaza okuhlukene okulalelwayo / kwevidiyo bese siyithumela kumqaphi okuwukuphela kwethu, sizikhethele mathupha ukuthi iyiphi ikhompuyutha eza kuqala esibukweni ngokuya ngalokho okumele sikwenze ngaleso sikhathi esinembile.
Kulesi siqondisi sizokukhombisa ungawalungiselela kanjani amakhompyutha amabili ukwaba umqaphi owodwa, ukhetha ngokucophelela izintambo ezi-3 ze-HDMI ozozisebenzisa futhi ezishintsha uzisebenzise phakathi kwamamodeli atholakala ku-Amazon. Esahlukweni esizinikezele sizobona nokuthi sisebenzisa kanjani ukushintshwa kwe-USB, ukuze sikwazi ukuphambukisa amadivayisi wethu wokufaka (ikhibhodi negundane) kusuka kwikhompyutha eyodwa kuya kwenye ngendlela elula.
FUNDA NONKE: Phatha abaqaphi ababili kwi-PC yedeskithophu enwetshiwe
Ungawasebenzisa kanjani ama-PC amabili ngeso elilodwa
Ukwenza le ndawo okwabelwana ngayo, kusobala ukuthi kuzodingeka sibe nesiqaphi esisodwa, ama-PC amabili angahleliwe noma amakhompyutha amabili wanoma yiluphi uhlobo (ngisho ne-PC kanye ne-laptop noma i-PC neMac Mini), izintambo ezintathu ze-HDMI zobude obufanele kanye neswishi. I-HDMI ekwazi ukuphatha imifudlana emibili ezimele ye-HDMI futhi ikhiqize okukodwa, okuzofinyelela ethekwini le-HDMI lokuqapha. Uma singakayithengi ikhompyutha entsha okwamanje, siphakamisa ukuthi ufunde wonke amathiphu namasu kusiqondisi sethu Izinto okufanele uzazi ngaphambi kokuthenga ikhompyutha entsha.
Khetha izintambo ezifanele ze-HDMI
Kulokhu kulungiselelwa sizodinga izintambo ezintathu ze-HDMI: eyodwa ikhompyutha esizoyikhomba njenge- "PC 1", enye ikhompyutha esizoyibiza nge- "PC 2" futhi ekugcineni ikhebula lokugcina le-HDMI, elizoxhuma ukukhishwa kwe-HDMI kweswishi esikhethiwe kusiqaphi sethu .
Uma sifuna ukubeka inkinobho kudeskithophu, izintambo ezimbili ze-PC 1 ne-PC 2 kumele zibe zinde ngokwanele (okungenani amamitha ayi-1,8), ukumboza ibanga eliphakathi kwama-PC amabili wendabuko. Ngezansi kunohlu lwezintambo ze-HDMI ezifanele le nhloso.
Ikhebula Le-HDMI Elisheshayo Eliphezulu, Inayiloni Elukiwe, 1,8m (€ 6)
Intambo ye-4K HDMI 2 amamitha SUCCESO (€ 7)
ICavo HDMI 4K 2m, ama-Snowkids Cavi HDMI 2.0 (€ 9)
Ukuxhuma iswitch kumonitha singasebenzisa ikhebuli elincane (Imitha eli-1 noma ngaphansi), ukuhlala isikhala esincane edeskini, ukubeka iswishi futhi ngqo ngaphansi kwesiqaphi (noma esisekelweni sayo). Ngezansi singathola uchungechunge lwezintambo ezifinyeziwe ze-HDMI.
I-AmazonBasics - ICavo Ultra HD HDMI 2.0 0,9m (€ 6)
I-IBRA Cavo HDMI 4K Ultra HD 1M (€ 8)
I-ALCLAP Cavo HDMI 4k Ultra HD 0.9m (€ 9)
Ngokusobala sinenkululeko ephelele yokumisa: singakhetha izintambo ezintathu ezinde, izintambo ezimbili ezimfushane kanye nentambo eyodwa ende noma ezintathu ezimfishane, kuya ngesikhundla nosayizi wamakhompyutha azoxhunywa. Ukuphela kwento ebalulekile ukuthi thola izintambo ezintathu zekhwalithi enhle ye-HDMI ngaphambi kokuqhubeka nomhlahlandlela wonke. Uma singazi ama-acronyms ahambisana nentambo ye-HDMI, sincoma ukuthi ufunde ukuhlaziywa kwethu okujulile Ungayikhetha kanjani ikhebula elifanele le-HDMI.
Khetha inkinobho efanele ye-HDMI
Ngemuva kokubona izintambo ze-HDMI esizisebenzisayo, siza kudivayisi ekuvumela ukuthi ushintshe umthombo wevidiyo phakathi kwamakhompyutha amabili ngokucindezela inkinobho: shintsha i-HDMI.
Le divayisi encane ikuvumela xhuma izintambo ezimbili ze-HDMI njengokufaka futhi unikeze okukhipha isinali elilodwa le-HDMI (okukhiphayo), ezothunyelwa kumonitha. Ukushintshela kwi-PC eyodwa kuya kwenye, konke okumele sikwenze ukuyicindezela Shintsha inkinobho ekhona phezulu (imvamisa ihambisana nama-LED amabili akhanyayo ukukhomba ngokushesha umthombo osebenzayo), ukushintsha phakathi kwama-PC amabili axhunyiwe futhi ubonise kuphela ividiyo kusuka kukhompyutha oyifunayo kumonitha. Ngezansi siqoqe amaswishi we-HDMI amahle kakhulu ongawathenga kwa-Amazon ngentengo yokuncintisana impela.
ITechole Shintsha i-HDMI Bidirezionale (€ 9)
I-GANA Aluminium Bidirectional HDMI Shintsha (€ 11)
Iswishi yeTechole HDMI (€ 12)
Lapho sithenga enye yalezi zinsiza, masiqiniseke ukuthi zibukeka kanjani ukushintshwa kwe-HDMI okubhida noma usekele i- "2 okokufaka-1 okukhiphayo"Uma kungenjalo, sizibeka engcupheni yokuthenga idivayisi efanayo kodwa ehluke kakhulu njengeI-HDMI splitter, evumela abaqaphi ababili ukuthi baxhumeke kwi-PC efanayo (isimo esihluke kakhulu lapho sisekela khona umhlahlandlela wonke).
Manje njengoba sesinakho konke esikudingayo ukuze sikwazi ukuxhuma amakhompyutha ethu amabili kumonitha owodwa singaqhubeka nokusetha kokugcina: xhuma izintambo ze-HDMI kusihlukanisi, ukuqapha kanye namakhompyutha, vula isilawuli bese uvula eyodwa yamakhompyutha amabili (noma womabili): iswishi ye-HDMI izokhanyela yodwa isebenzisa okwamanje okuvela ezintambo ze-HDMI nangokucindezela inkinobho esingakhetha ukuthi iyafuna yini bukela ividiyo kusuka ku-PC 1 noma ku-PC 2; ukuze konke kuhlanganiswe ngokwengeziwe futhi singalandela izinyathelo zomhlahlandlela wethu Igundane elifanayo nekhibhodi ukulawula amakhompyutha amabili noma ngaphezulu, ngakho-ke ungabelana ngegundane nekhibhodi phakathi kwalawa makhompyutha amabili (empeleni sizoba nokushintsha okubili, i-HDMI eyodwa ne-USB eyodwa). Isishintshi se-HDMI singasetshenziswa futhi xhuma ama-consoles amabili kuthelevishini Inembobo eyodwa ye-HDMI, ngakho-ke ungazisebenzisa zombili ngaphandle kokushintsha i-TV (izindleko ezibiza kakhulu).
Uma sifuna ukusebenzisa ama-monitors amabili asondelene kukhompyutha eyodwa, sisebenzisa amachweba e-HDMI ekhadi levidiyo elizinikele, sincoma ukuthi ufunde imihlahlandlela yethu Ungaxhuma kanjani ama-monitors amabili kwi-PC mi Ukucushwa kwesikrini okubili ku Windows 10 ukusebenza nabaqaphi ababili.
Uma umqaphi esinayo engenayo imbobo ye-HDMI, sekuyisikhathi sokuyishintshela eyakamuva kakhulu, sikhethe phakathi kwamamodeli abonwe emihlahlandlela yethu Abaqaphi be-PC abahamba phambili bokuthenga phakathi kwama-100 nama-200 Euro mi Thenga i-21: 9 Wide Monitor (Isikrini Esibanzi se-Ultra).
Ungakubuyisela kanjani ukuxhumana kwenethiwekhi ku-Mac
Amathayili, afakiwe, noma afakiwe windows Windows 10
Awekho ama-USB Flash Drives noma amaDrayivu angaphandle atholakele - Zonke Izixazululo
Bheka imisebenzi ye-Windows ngomlando womcimbi
Ungahlela kanjani imisebenzi ku-Windows
Ungawubuka kanjani Umlando Wephrinta weWindows
Khubaza ukusheshiswa kwe-Windows ku-Windows ukuze usakaze ukusakazwa kwevidiyo
Phatha izingqapheli ezimbili kwi-PC yakho enwetshiwe yedeskithophu
Ungayithulisa kanjani i-PC
Microsoft .NET Uhlaka, lungisa ukufaka uphinde ukhiphe amaphutha
Lungisa amaphutha e-Windows ku-log yomcimbi
Imihlahlandlela yamakhompiyutha Mini enamidwebo namatafula kubo bonke abathanda
Thola bese ususa amafolda angenalutho kuWindows